Imithwalo ye-Load Break switch (LBS) Abakhiqizi & Abahlinzeki - Ifektri yaseChina Load Break switch (LBS)
FZW32-40.5 (RD) Series Outdoor High Voltage Umshini Layisha Break Shintsha
I-FZW32-40.5 yangaphandle AC AC disc disc vacuum load break switch ingumkhiqizo omusha osebenzisa ulwazi lwasekhaya lokukhula komshini wokukhiqiza umshini wokukhiqiza nobuchwepheshe obuphambili bezilwandle ukuklama kanye nomuntu we-ireact. inkinobho yokuqhekeza umthwalo yakhiwa yinqamula blade, umshini wokuphazamisa ukusebenza kanye nendlela yokusebenza. i-vacuum yokucima i-arc, kunokufaneleka njengamandla okucima i-arc, ukusebenza okuthembekile, isikhathi eside sokuphila, ivolumu encane, akukho ngozi yokuqhuma futhi akukho ukungcola okukufelayo ...
PGS Series Outdoor High Voltage SF6 Layisha Break Shintsha
Isishintshi se-PGS-630A pole sigxunyekwe umthwalo osetshenziswayo ukwephula amandla kagesi alinganisiwe ayi-12/24 / 40.5kV, kukalwe uhlelo lwamanje lokusabalalisa amandla lwe-630A, 50 / 60Hz, ukuvala umthwalo wamanje nangaphezulu komthwalo wamanje wesistimu yamandla, ingahlukanisa ngokuzenzakalela izingxenye ze- ukusatshalaliswa kwamandla okuvela amaphutha. Iswishi ifaniswe nesilawuli se-elekthronikhi esinobuchwepheshe bamuva. Iswishi inamamodi wezandla, izimoto, izindlela zokusebenza ezikude. Isilawuli se-elekthronikhi sizofakwa ngaphakathi kwama-stainles ...
FZW32-12 Series Outdoor High Voltage Ukunqamula Umshini Layisha Break Shintsha
1. Uhlaka lwe-FZW32-12 uhlobo lwangaphandle lwangaphandle lokunqamula i-vacuum break switch switch uhlobo olusha lomshini wokushintsha okungukuhlanganiswa kwesipiliyoni esivuthiwe seswishi ekhona yomthwalo wasekhaya nobuchwepheshe obuthuthukisiwe bokwakhiwa kwangaphandle. Le switch break break yakhiwa nge-disconnector, i-vacuum interrupter kanye nendlela yokusebenza nezinye izingxenye. Ngokusebenzisa isimiso sokuphazamisa i-vacuum, ngekhono lokuqinisa elinamandla, ukusebenza okuthembekile, impilo ende yenkonzo, ivolumu encane, akukho dange lokuqhuma ...
Izimo zemvelo 1. Ukuphakama: 1000m; 2.Izinga lokushisa eliphakeme: -40 ~ + 40 ℃; 3. Umswakama ohlobene: isilinganiso sansuku zonke sama-95%, isilinganiso sanyanga zonke esingu-90%; 4. Ukuzamazama komhlaba: 8 degree; 5. Ibanga lokungcola: II degree. Imingcele yobuchwepheshe NO. Inani Leyunithi Yezinto 1 Amandla kagesi alinganisiwe kV 40.5 2 Ububanzi obulinganisiwe Hz 50 3 Isilinganiso samanje sesilinganisi samandla kagesi A 63 4 1min imvamisa yamandla amelana namandla kV 95/110 5 Umfutho wombani ukumelana namandla kagesi kV 185/215 6 Ukuphakama okulinganiselwe ukumelana ne-kA yamanje 7 .. .
I-FZN25-12 Uchungechunge lwe-Indoor High Voltage Vacuum Load Break switch
I-FZN25-12 yangaphakathi ye-HV vacuum load break switch switch 3-phase AC 50Hz 12kV switch switch equipment .. Type Uhlobo lomsebenzi: i-operati yangakwesokudla ku-d ukusebenza kwesobunxele; Direction Isiqondisi sokusebenza: ukusebenza kwesobunxele, ukusebenza kwesokudla; ♦ Isicelo: switchgear yangaphakathi ye-12kv. Izimo Zemvelo temperature Izinga lokushisa eliphakeme: -25 ° C 〜 + 40 ° C; ♦ Ukuphakama: <1000m (ngenhla kogu lolwandle); Hum Umswakama ohlobene: isilinganiso sansuku zonke <95%, njalo ngenyanga ...
FN12-12 Series Indoor High Voltage Air Layisha Break Shintsha
I-FN12-12 yangaphakathi ye-HV air load break switch iyisigaba sesithathu se-AC 50Hz 12kV imishini yokushintsha yasendlini. ♦ Ukufakwa indlela: phambi-agibele amahhashi, ohlangothini ukukhwezwa, flip ogibele; Mechanism Indlela yokusebenza: indlela yokusebenza yasentwasahlobo, uhlobo lwezandla nohlobo lukagesi olutholakalayo; Uhlobo lomsebenzi: ukusebenza kwesokudla nokusebenza kwesobunxele; ♦ Isicelo: switchgear yangaphakathi ye-12kv. Izimo Zemvelo temperature Izinga lokushisa eliphakeme: -25 ° C 〜 + 40 ° C; ♦ Ukuphakama: <1000m (ngenhla kogu lolwandle); ♦ Umswakama ohlobene: isilinganiso sansuku zonke <95%, monthl ...
FN7-12 Series Indoor High Voltage Air Load Break Shintsha
I-FN7-12 wuhlobo olusha lomoya osendlini ophakeme onamandla okuphumula. Ifanele i-AC 50Hz, ilinganiselwe i-voltage 12kV yesigaba sesithathu samandla kagesi we-AC, njengokwephula umthwalo wamanje nokuvala okwamanje wesekethe emfushane. Uhlobo Incazelo Izimo Zokusebenza ● Izinga lokushisa elincane: -25 ° C ~ 40 ° C; ● Ukuphakama: <1000m; ● Umswakama ohlobene: isilinganiso sansuku zonke <95%; Isilinganiso sanyanga zonke <90%; ● Akuyikubakho gesi owonakalisayo, omlilo nowokuqhuma noma umusi esizeni; ● Akukho kudlidlizela okunodlame njalo. Technica ...
FN5-12 Series Indoor High Voltage Air Load Break Shintsha
Uhlobo lwe-FN5-12 uhlobo lwangaphakathi lwe-AC high voltage load brek switch (Ngemuva kwalokhu obizwa ngokuthi yi-load break switch) ama-apula kunethiwekhi ye-AC 50Hz 12kV, yokwephula umthwalo wamanje nokuvala isekhethi yesikhashana emfushane. Layisha ikhefu switch nge-fuse kunganqamula isifunda esifushane samanje sokuvikela ukuvulwa. Inkinobho yokulayisha ingasetshenziswa nge-CS6-1 yohlobo lokusebenzisa imanyuwali yokusebenza, futhi lo mkhiqizo okhethekile usebenzisa indlela yokusebenza ye-CS. Uhlobo lwe-FN5-12 yohlelo lokusebenza lwangaphakathi lwe-AC high voltage load break switch (Ngemuva kwalokhu ...